Inkampani Izindaba Factory | China Inkampani Izindaba Abakhiqizi, Abanikezeli
Thinta ephenya umshini omunye HAOD ukwenza ukuphila kuwusizo kakhudlwana!
Century amabili nanye kuyinto Imininingwane esidijithali. Asikwazi ukuphila ngaphandle ithelevishini ne-Internet. In the network kolwazi, singathola ulwazi olufunayo ngokushesha ngokusebenzisa Internet. Ekuphileni okungokoqobo, ngokusebenzisa umshini touch nophenyo, singakwazi futhi ngokushesha sibone ...
Yiziphi izinzuzo isicelo se holographic isibonisi iKhabhinethi?
I holographic isibonisi iKhabhinethi kuyinto ukhulile isibonisi ubuchwepheshe ukuthuthukiswa isayensi nobuchwepheshe. Ngokusebenzisa ubuchwepheshe we crystal wezwe ohlangene kwelivi holographic, isithombe kungenziwa okwesikhashana emoyeni ngaphandle kunoma yisiphi isikrini noma aphakathi, kungakhathaliseki kuyiphi engela kuba ...
Indlela ukukhetha izinga okusezingeni touch nombuzo umshini?
With ukuthuthukiswa kolwazi digital, isicelo touch nombuzo umshini liyakhuphuka. Kusukela yasebhange, ihholo zebhizinisi esiteshini, esikhumulweni sezindiza ukuba zezitolo, amahhotela nezinye emikhakheni ehlukene, ungabona isicelo touch nombuzo umshini. Ngeke sifinyelele kuphela tou ...
inzuzo Isimiso nokusebenzisa holographic isibonisi iKhabhinethi
Nge ukuthuthukiswa ngokushesha isayensi nobuchwepheshe, holographic kwelivi ubuchwepheshe isetjentiswe ezingasho. Holographic isibonisi iKhabhinethi ukusetshenziswa holographic projection ubuchwepheshe ukufeza isibonisi ngakuthathu lezinto, umphumela ezibukwayo liyakhula namuhla, isicelo okulawulwa ...